अर्थ संसार: फेरि पहिलेजस्तो सस्तो कर्जा पाइँदैन
मौद्रिक नीति घोषणा गर्दा गर्भनरले बैंकहरूसँग तरलता छ, बार्गेनिङ गरेर ब्याजदर घटाउनुहोस् भन्नुभएको थियो । कस्ता ऋणीले यो फाइदा लिएका छन् ?
बैंकले ब्याजदर निर्धारण गर्ने पहिलो आधार कर्जाको जोखिम हो । बैंकसँग तरलता छ, जोखिम कम छ, ऋणीले समयमै ब्याजदर, किस्ता भुक्तानी गरेको छ भने त्यो ऋणीसँग बार्गेनिङ गर्ने आधार हुन्छ । ग्राहकले अरूभन्दा आफू राम्रो भएको आधारमा वार्गेनिङ गर्ने क्षमता राख्ने हो । यस्तो स्थितिमा बैंकहरूले ब्याजदर नघटाउने भन्ने कुरै हुँदैन । व्यक्तिगत कर्जामा पनि ग्राहकको ऋण तिर्न सक्ने क्षमता, आयस्रोत, ऋणीको इतिहासलाई हेरेर बैंकले ब्याजदर घटाउने वा नघटाउने निर्णय गर्छन् । इतिहास भन्नाले समयमै कर्जा तिरे÷नतिरेको भन्ने बुझ्नुपर्छ । राम्रा र नियमित ग्राहकलाई बैंकले सधैं आँफैसँग राख्न चाहन्छन् । बार्गेनिङ चिनजानको आधारले व्यावसायिक संस्थामा हुँदैन । ऋणीको प्रस्ताव, क्षमता र जोखिमको आधालाई हेरेर बैंकले निर्णय गर्ने हो । फेरी अहिलेको प्रतिस्पर्धी स्थितिमा राम्रो ग्राहक जोगाइराख्नु बैंकका लागि एकदमै कठिन काम हो । खुला बजारको राम्रो पक्ष नै यही हो ।
अर्को वर्षसम्म उत्पादनमूलक कृषि र ऊर्जामा १० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता बैंकहरूलाई छ । यसको प्रभाव कस्तो पर्छ ?
अहिले नयाँ परियोजनाहरू आएका छ्रैनन् । विगतमा हाइड्रो (जलविद्युत्) र सिमेन्टलगायतका उद्योगमा लगानी भए । अधिकांश बैंकहरूले पुरानै विस्तारित परियोजनामा लगानी गरिरहेका छन् । जलविद्युत्मा नविलले पहिल्लैदेखि प्राथमिकतासाथ लगानी गरेको छ । लघुजलविद्युत् परियोजनामा पनि नबिलको राम्रो उपस्थिति छ । कृषिअन्तर्गत पोल्ट्री (कुखुराजन्य) व्यवसायका साथै चिया उत्पादनमा पनि नबिलको लगानी छ । कृषि फार्ममै भने अहिलेसम्म लगानी भएको छैन । यो क्षेत्रमा जान बैंकले अध्ययन गरिरहेको छ । नबिलको हाइड्रो र कृषिमा लगानीे राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुरुप छ ।
नविल २८ वर्षमा चलिरहेको छ । तर, पछिल्लो समयमा यसको सेवाप्रति सर्वसाधारणको गुनासो सुनिन्छ । एटीएममा समस्या, ग्राहकलाई थाहा नदिई अनावश्यक शुल्क लिएको गुनासो छ । बैंकको सेवा खस्किएको हो ?
सामान्यतया बैंकले लिने सबै प्रकारका सेवाशुल्क पारदर्शी हुन्छ । यसबारेको जानकारी बैंकको वेबसाइटमै उल्लेख गरिनुका साथै अन्य तरिकाबाट पनि ग्राहकलाई जानकारी दिएका हुन्छौं । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशनअनुसार पनि ग्राहकलाई जानकारी नदिई कुनै प्रकारका शुल्क लिन पाइँदैन । त्यसैले विनाजानकारी शुल्क लियो भन्नु गलत हो । एटीएम र ग्राहकलाई दिने सेवामा भने केही गुनासा आएको हुनसक्छ । यो सुधार गर्दै जाने कुरा हो । स्तरीय सेवा दिन सकिएन भने ग्राहक किन नबिलमा आउने ? नबिल व्यवस्थापनले ग्राहकबाट आएका गुनासालाई यथोचित ध्यान दिएर सुल्झाउन हरदम प्रयासरत छ । २८ वर्षमा नबिलको सवल पक्ष स्तरीय सेवा हो । गुणस्तरीय सेवा नभएको भए नबिल यो अवस्था आइपुग्ने सम्भावना थिएन । त्यसैले बैंकको कारोबार वृद्धिसँगै सेवा–सुविधा बढाउन सकिएन भने गुनासो आउनु स्वाभाविक हो । एटीएममा एउटा घट्नाबाहेक अरू त्यस्तो ठगिको घटना भएजस्तो लाग्दैन । लोडसेडिङलाई ख्याल गरेर नबिलले सबै एटिएम काउन्टरमा लोडसेडिङ तालिका राखेको छ । साथै लोडसेडिङ हुँदा ब्याट्रीले काम नगरे वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि नजिकको एटिएम काउन्टरबारेको सूचना पनि छ । यसले ग्राहकलाई सजिलो बनाउँछ ।
नबिलको अहिलेको स्थिति र अबको रणनीति कस्तो छ ?
विगत धेरै वर्षदेखि नबिल अग्रिणी स्थानमा आइरहेको छ । गत वर्षका विविध समस्या, बजारको तनावका कारण बैंकको खराब कर्जा र जोखिम व्यवस्था बढ्ने अवस्थामा रहे पनि बैंकको नाफामा भने कुनै असर परेको छैन । जेठसम्मको विवरण त नबिलले सार्वजनिक गरिसकेको छ । बैंकको लक्ष्यअनुसार नै गत वर्षभन्दा बैंकको कारोबार राम्रो बृद्धि भएको छ ।
बैंकिङ चमत्कार हुने क्षेत्र होइन । सेवालाई गुणस्तरीय बनाउँदै लैजाने हो । बैंकमा साधारणदेखि इन्टरनेट, मोबाइल, एटीएमबाट सेवा लिने सबै प्रकारका ग्राहकलाई स्तरीय सेवा दिनु नै नबिलको पहिचान हो । आफ्नो सेवा चुस्त र स्तरीय बनाउन स्वचालित प्रविधि प्रयोगमा नबिलले जोड दिँदै आएको छ । अहिलेको ठूलो जनशक्ति युवावर्ग भएकाले तिनीहरूलाई समेट्नु आवश्यक छ । यसका लागि प्रविधिमा आधारित नवीन र स्तरीय बैंकिङ सेवामा नबिल तल्लीन छ ।
मौद्रिक नीतिमा ब्रान्चलेस, मोबाइल बैंकिङलगायत प्रविधिमा आधारित सेवालाई जोड दिने उल्लेख छ । यतातिर नविलले के गर्दैछ ?
मोबाइल बैंकिङ सेवामार्फत नबिलले खाताको रकमबारे सोधपुछ, रकम पठाउने र घरायसी बिल पेमेन्ट गर्न सकिने व्यवस्था मिलाएको छ । ब्रान्चलेस बैंकिङका लागि नबिलले अध्ययन गरेर तत्काल प्रभावकारी नहुने देखेर अघि बढाएका छैनौं । आवश्यकता महसुस भए भने जुनसुकै बेला यो क्षेत्रमा काम सुरु गर्न तयार नै छौं ।
नबिलको कारोबारमा सहायक व्यवसायले कस्तो भूमिका खेलेको छ ?
नविल इन्भेस्टमार्फत काम सुरु गरेको धेरै वर्ष भएको छैन तर पनि राम्रो छ । म्युचुअल फन्डको काम गर्न अघि बढिरहेका छौं । अन्तिम स्वीकृतिको पर्खाइमा बैंक छ, चालू आवको पहिलो त्रैमासिकभित्रै कारोबार सुरु गर्ने नबिलको लक्ष्य छ । यसले सेयरबजारलाई पनि सहयोग गर्छ । अब आउने पूर्ण बजेटमा म्युचुअल फन्डलाई केही सहुलियत दिनुपर्छ । त्यस्तै नबिलले केही वषैअघि देखि बैंकिङ क्षेत्रमा चलेको ‘बैंकान्स्योरेन्स’ पनि गरिरहेको छ । बैंकले विभिन्न जीवन बिमा र नीर्जिवन बिमा कम्पनीको संस्थागत अभिकर्ता बनेर काम गरेको छ । एकातिर संस्थागत अभिकर्ताले ग्राहकलाई बिमालेखबारे राम्रोसँग बताउन सक्छ भने ग्राहकले एकै ठाउँबाट धेरै सेवा प्राप्त गर्ने भएकाले फाइदाजनक हुन्छ ।
विदेशमा शाखा खोल्नेबारे नविलले तयारी गरिरहेको थियो । प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ?
नबिलले दुई–तीन वर्षदेखि विदेशमा शाखा खोल्न अध्ययन गरिरहेको छ । हालै म्यानमारमा शाखा खोल्न अध्ययन भएको छ । यसअघि भारतमा पनि शाखा खोल्ने योजना बनाएको थियो । तर, तत्कालीन समयमा पुँजी धेरै चाहिने भएकाले शाखा खोल्न सकिएन । भारत दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) क्षेत्रकै ठूलो व्यापारिक मुलुकका साथै धेरै नेपाली भएकाले पनि त्यहाँ नेपाली बैंकको आवश्यकता बढी छ । नेपाली बैंक भएमा भारतमा गएका नेपालीलाई कारोबार गर्न सहज हुन्छ । भारतलगातय विभिन्न मुलुकमा शाखा खोल्न सहुलियत दिनेबारे सरकारी प्रयास नै आवश्यक देखिएको छ । यसले विदेशमा रहेका नेपालीलाई सेवा पु¥याउन र रेमिटेन्स कारोबारमा पनि सजिलो हुन्छ । दुई दशकभन्दा बढी समय मुलुकमा काम गरेर क्षमता विकास गरेपछि आफ्नो दायरा बढाउन विदेशमा शाखा खोल्नु एक हिसाबले उपयुक्त पनि हो । विदेशमा शाखा खोल्नु भनेको बैंकलाई मात्र फाइदा नभएर देशका लागि पनि राम्रो हो । शाखा खोल्न स्वदेशी नियामक निकाय, शाखा खोल्ने देशेको नीति नियम तथा त्यहाँको नियामक निकायको पनि स्वीकृति चाहिने भएकाले लामो प्रक्रिया पार गर्नुपर्दा भन्नासाथ विदेशमा शाखा खोल्न सकिँदैन ।